U-Semalt Ukhuluma Ngamaphi Amaphutha Okufanele Uwagweme Ku-SMM
Amakhasimende ngo-2017 alindele izinhlangano zebhizinisi zigcina ukuxhumana nabo njalongokusebenzisa amanethiwekhi omphakathi. Kodwa-ke, izinkampani eziningi ze-e-commerce azibheki ukuphumelela kokugqugquzelwa kwezokuxhumana kanye ne-Search EngineUkuthuthukisa (i-SEO) ekukhangeni nasekugcineni amakhasimende.
uJack Miller, umphathi wePhasimende Impumelelo i-Semalt ,kubonisa amaphutha amathathu amakhulu izinhlangano ezenzayo lapho kuqhuba imikhankaso yokukhangisa yemidiya yomphakathi.
1 - antitaccheggio invisible hand. Ukuqalisa Umkhankaso Ngaphandle Kweqhinga Eliphumelelayo
Kubalulekile ukuthuthukisa imigomo yemidiya yomphakathi yokuthuthukisa isu lokuthengisa inthanethi.Ukumaketha kwezokuxhumana komphakathi kungaba nemigomo eminingana. Omunye umgomo kungase kube ukuthuthukisa ukuqashelwa kwezimpawu phakathi kwamakhasimende ahlosiwe. Omunye umgomo womphakathiUkumaketha kwamaphephandaba kungase kube ukusebenzisa amanethiwekhi omphakathi ukunikeza izinsizakalo zokusekela amakhasimende. Uhlelo oluhle lokuxhumana nabantu luhlanganisa imigomo emininganaukwandisa ukusebenzisana kwebhizinisi namakhasimende ahlosiwe. Isu eliphumelelayo linesipiliyoni esihle senethiwekhi yomphakathi.
Amabhizinisi aphathelene nemikhiqizo nemikhiqizo yokuphila nemisebenzi akhuthazwa ukubasebenzisa amapulatifomu enethiwekhi social Pinterest noma Instagram. I-Pinterest inomsebenzi we-e-commerce okwenza amakhasimende athenge imikhiqizo nomaamasevisi online. Abadayisi abanikela ngemikhiqizo yezobuciko kanye nezinsizakalo ezenzakalayo kufanele basebenzise amapulatifomu e-YouTube ne-Facebook ngenxaividiyo yabo ephakeme yokuhlanganyela ukwabelana. Kubalulekile ukuba ibhizinisi likhuthaze amasayithi ayo okuxhumana nabantu.
Ukukhuluma ngemidiya yezenhlalo kuma-imeyili kuyindlela ephumelelayo yokugqugquzela abezindaba bezenhlalakahleamasayithi kumakhasimende ahlosiwe. Enye indlela ye-SEO yokuphromotha okuhle ifaka ukufaka izixhumanisi zezokuxhumana zenhlalo kwiwebhusayithi yebhizinisi.
2. Ukuhluleka Ukulalela Nokuphendula
Amakhasimende ahlale ephawula ngemikhiqizo namasevisi anikezwa ibhizinisiizinhlangano. Kubalulekile ukuthi abaphathi benkampani balalelisise. Kukhona amathuluzi amaningana angasetshenziswa ukuxhumana naboikhasimende, isibonelo, Ukukhuluma Komphakathi kanye ne-Hootsuite. Noma kunjalo, zilinganiselwe ngamakhono. Ngakho-ke, ibhizinisi kufanele liphendulekunoma yikuphi okuthunyelwe ngabasebenzisi.
i-Facebook iyinhlangano yesikhulumi sezokuxhumana esenza ibhizinisi liphendule ngokuphumelelayoimiyalezo yamakhasimende ahlosiwe. Izinkampani zithola izinselelo eziningana lapho zihambisa izinsizakalo nemikhiqizo. Amanethiwekhi omphakathi akwaziamabhizinisi ukwazisa amakhasimende ngezinkinga noma izinselele ekusebenzeni kwebhizinisi.
3. Ukugcinwa kusuka ekuhlolweni
Kubalulekile ukuhlola ukusebenza kwamanethiwekhi omphakathi. Ibhizinisiangasebenzisa izindlela ezintsha zokusebenzisana namakhasimende. Ividiyo ebukhoma isici esitholakala ku-Facebook naku-Instagram. Ithuthukisa isikhathi sangempelaukuxhumana phakathi kwabasebenzi bekampani namakhasimende. Inkampani ingazisa izethameli ezihlosiwe mayelana nomkhiqizo omusha ngevidiyo ebukhomaisici.
Amabhizinisi angasebenzisa futhi ukusakaza bukhoma kwemikhankaso yokukhuthaza imikhiqizo ye-Facebook. Ukusakaza bukhomakudonsela izethameli ezinkulu ngoba ixhumano futhi isebenzisa amagama angokhiye we-SEO. Abasebenzisi bezokuxhumana bezenhlalo banikezwa ithuba lokubuzaimibuzo nokufuna ukucaciswa. Isikhathi sokusakaza bukhoma senza ibhizinisi lifunde kusuka kumakhasimende, ikakhulukazi endaweniyokuthuthukisa ukwaneliseka kwamakhasimende.
Ukusebenzisa i-SEO kumkhuba wakho kungathuthukisa imizamo yokumaketha yezokuxhumana. SEO ochwephesheangasebenzisa amagama angukhiye asebenzayo ekuthunyeleni kwezindaba zabo zenhlalo. Amakhasimende azokhangwa ekuthunyelweni okunolwazi olufanele mayelana ne-ukusebenza komkhiqizo noma isevisi.